Sidee Loogu Heli Karaa Taageerayaal Badan barta Twitter? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sida loo helo taageerayaal badan barta twitter?
April 26, 2021 0 comments 296
Twitter-ka ma yahay shabakadda bulshada ee ugu muhiimsan maanta? Suurtagal maaha, laakiin shaki la'aan waa mid ka mid ah kuwa ugu qaaska ah oo ay isticmaalaan macaamiisha shabakadaha.
Twitter wuxuu bixiyaa tiro aad u tiro badan oo daabacaado leh macluumaad fara badan oo kala duwan. Ku meeleynta naftaada barta twitter-ka iyada oo loo marayo koonto tiro badan oo raacayaal ah waxay noqon kartaa hawl kacsan, laakiin macquul maahan, gaar ahaan adduunyada maanta tartamaya.
Kordhinta tirada dadka raacaya astaantaada ma aha hawl fudud, gaar ahaan marka la dhajinayo tweets soo jiita dareenka waa hawl adag. Maaha isku mid inaad ahaato qof caadi ah marka loo eego qof caan ah ama shakhsiyad dadweyne, oo laga yaabo inay u fududaato inuu helo "raaca" aad loo qadariyo.
Sidaa darteed, si aad u ururiso taageerayaal badan maalin kasta, waa inaad barataa tabaha qaar si aad u gaarto. Waxaa jira talo soo jeedinno ay tahay inaad raacdo Waa kuwan soo socda:
Tabaha lagu kordhinayo kuwa raacsan
Waxa ugu weyn ee ay tahay inaad sameyso ayaa si habboon u qaabeynaya astaantaada. Markaad xiriir la leedahay, qor noolahaaga oo dooro astaanta iyo sawirrada madaxa.
Ku dheji goobtaada juqraafi iyo xitaa cinwaan madax ah oo matalaya astaantaada.
Istaraatiijiyadda waa in loogu talagalay in lagu kordhiyo muuqaalka muuqaalka, daabacaadda tweets xiiso leh oo soo jiita dareenka iyo hagaajinta isdhexgalka. Dhinaca kale, waa inaad ballaadhisaa gaadhistaada oo aad ka faa'iideysataa gorfaynta.
Xudunta boggaaga waa inuu noqdaa tweets-ka.
Helitaanka tweets si loo soo jiito dareenka isticmaalayaasha waa in loo jiheeyaa ujeeddada laga leeyahay astaantaada shabakad bulsheed. Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala twitter-ka ayaa adeegsada boggooda si ay uga hadlaan mowduuc gaar ah. Shabakadaha waxaad ka heli doontaa tusaalooyin oo dhan. Laga soo bilaabo kuwa daabaca mawduucyada la xiriira gastronomy sida cuntada noocyadeeda kala duwan, ilaa fiidiyowyada nolol maalmeedkooda.
Sidaa darteed, helitaanka waxa ku jira astaantaada guud waxay noqon doontaa tan ugu habboon ee dammaanad qaadaysa socodka joogtada ah ee aan la joojin karin ee raacdada. Isticmaalayaasha shabakadaha ayaa ku takhasusay isticmaalka waxyaabaha ku jira, sidaa darteed waa inaad si taxaddar leh uga fikirtaa, taas oo ah qaabka adiga kugu habboon.
Martiqaad qof inuu kuusoo raaco ayaa u fudud sida ugu dhiirrigelinta inuu sidaas sameeyo. Isticmaalayaasha ugu caansan ee shabakadaha waxay raadinayaan inay bartaan, isku xirmaan oo ay la baashaalaan dadka leh dhadhanka la midka ah kuwooda.
Aad ayey muhiim u tahay in boggagaaga uu si isdaba joog ah u qoro, maaddaama astaamaha shabakadaha ay yihiin isbeddelkooda firfircoon ee joogtada ah. Tani waxay ka caawin doontaa kuwa raacsan inay la cusbooneysiiyaan daabacaadahaaga. Tani waxay u muuqan kartaa mid fudud, laakiin waxay ku lug yeelan doontaa dadaal hal abuur leh oo joogto ah.
Si kor loogu qaado gaadhistaada waxaad ficillo qaarkood ku dhaqmi kartaa. La macaamil kuwa raacsan, si ay u dareemaan in lagu aqoonsaday dareenkaaga.
In koontadaadu gudbiso dhacdooyinka waqtiga dhabta ah. Iyada oo loo marayo hashtag-ga rasmiga ah ee munaasabadda, waxaad awoodi doontaa inaad la fal-gasho ka soo qaybgalayaasha dhacdada oo aad suurtagal ka dhigto inaad horumariso muuqaalkaaga astaantaada ee dhagaystayaasha aan ka ahayn kuwii aad u baran jirtay.
Waxaa sidoo kale lagugula talinayaa inaad ka gudubto xisaabaadkaaga warbaahinta bulshada. Waxay ku habboon tahay in daabacadahaaga twitter-ka ay sidoo kale ka muuqdaan Facebook ama Instagram, si aad adigu u ogaatid kuwa kale ee isticmaala.
1 Tabaha lagu kordhinayo kuwa raacsan
2 Xudunta boggaaga waa inuu noqdaa tweets-ka.
3 Kordhi gaadhistaada
Sideen lacag ugu sameysan karaa xisaabteyda 'Instagram'?
Sidee loo adeegsadaa twitter?